Sintomy maimaimpoana ny WhatsApp Plus, ampio fampiasa fanampiny! | Androidsis
WhatsApp Plus dia fanovana ny fampiharana WhatsApp mahazatra izay ahafahantsika manamboatra azy io ary manana anjara asa fanampiny vaovao Ao amin'ny fampiharana WhatsApp anay, io no fomba mora indrindra hanararaotana betsaka indrindra amin'ireo mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo indrindra eto an-tany. Azontsika atao ny mahatakatra ny WhatsApp Plus ho "mod", izany hoe rindrambaiko izay novaina mba hahafahantsika manana asa maro kokoa sy fanaingoana bebe kokoa, tanterahin'ireo manam-pahaizana momba ny solosaina izay te hanao ny ankamaroan'ny rindranasa izay voafetra ihany .
Amin'izao fotoana izao, ny WhatsApp Plus dia misy tanteraka na eo aza ny tsindry nazaky ny mpamorona ny WhatsApp hanandrana hanala ity "mod" ity amin'ny mpizara fisintomana rehetra. Misaotra an'ity kinova Whatsapp Azontsika atao ny manamboatra ny fomba fahitan'ny hafa anay mifamatotra, manana resadresaka maromaro misokatra amin'ny fotoana iray, ary manova ny toerana isehoan'ny sary masina tsirairay ao anatin'ny fampiharana aza.
1 Ahoana ny fampidinana maimaim-poana ny WhatsApp Plus
2 Ahoana ny fametrahana WhatsApp Plus ReBorn
3 Aiza no hampidina ny kinova WhatsApp Plus farany
4 WhatsApp Plus Holo sy WhatsApp Plus Jimods
Ahoana ny fampidinana maimaim-poana ny WhatsApp Plus
Ny fametrahana WhatsApp Plus dia mora ary azon'ny rehetra atao. Voalohany indrindra dia hilazantsika fa misy WhatsApp Plus amin'ny fitaovana Android, ho an'ny fitaovana iPhone dia ilaina ny manao ny Jailbreak ary tsy miorina ny kinovan'ny WhatsApp Plus, izay mety hitarika amin'ny fanakanana ny kaonty, noho izany izahay hampianatra anao ny mametraka WhatsApp Plus ho an'ny Android.
alohan'ny misintona maimaimpoana ny WhatsApp Plus ary apetraho, voalohany indrindra dia hanao kopia backup an'ny chat WhatsApp rehetra izahay, fa izao dia mankany amin'ny: WhatsApp Settings> Chat Settings> Save Conversations. Rehefa voavonjy dia miroso amin'ny fanesorana ilay rindranasa izahay.
Nosintominay ny .APK an'ny WhatsApp Plus amin'ny teny Espaniôla avy amin'ny manaraka LINK.
Ahoana ny fametrahana WhatsApp Plus ReBorn
Vantany vao alaina, dia mandeha fotsiny amin'ny fizarana fampidinana ao amin'ny fitaovana Android izahay ary miroso amin'ny fametrahana. Rehefa apetraka dia tsy maintsy miroso amin'ny fidirana amin'ny nomeraon-telefaonintsika isika, manaraka ny fomba fanao mitovy isaky ny mametraka ny kinova WhatsApp.
Tsy maintsy miandry minitra vitsivitsy isika ho an'ny nomaniny ho solon'izay resaka vita izay nataontsika taty aoriana tamin'ny iray amin'ireo dingana voalohany hamerenana amin'ny laoniny. Ho hitantsika ho azy ireo fiasa vaovao ambony havanana, ao amin'ny kisary WhatsApp vaovao miaraka amin'ny marika "+" eo afovoany.
Aiza no hampidina ny kinova WhatsApp Plus farany
WhatsApp Plus ReBorn dia hijery ireo fanavaozana ary hanavao azy ho azy, fa raha mila misintona ny kinova farany ianao dia afaka mankany amin'ny tranokala ofisialy amin'ity LINK ity misintona WhatsApp Plus ary sintomy mivantana izy io mba hamerenany azy amin'ireo dingana etsy ambony.
WhatsApp Plus Holo sy WhatsApp Plus Jimods
Tamin'ny 2014 ny Fanovana ho an'ny WhatsApp Plus, dia kinova an'ny WhatsApp Plus izay mamela anao hametraka ny interface Android Holo, na izany aza, ity kinova ity dia najanona tamin'ny tapaky ny 2015 noho ny zava-misy efa ampiasain'ny ankamaroan'ny fitaovana Android ity interface ity.
Na izany aza, hitantsika ihany koa ilay kinova malaza WhatsApp Plus Jimods, kinova fanatsarana ary izany dia ahafahanao manafina ny toerana ao amin'ny WhatsApp tanteraka, mora be ny misintona azy. Raha te-hametraka azy io dia tsy maintsy esorinao ny kinova WhatsApp na ofisialy na novainao tao amin'ilay fitaovana ary andao hametraka ity .apk mivantana avy amin'ny fahatsiarovan'ny fitaovanao, mba hahafahanao mampiasa azy io aza mametraka whatsapp amin'ny takelaka.